Muxumed Maxamed Jaamac oo noqday askariga keliya ee laga qafaashay B/xaawo | Dhacdo
Home Wararka Maanta Muxumed Maxamed Jaamac oo noqday askariga keliya ee laga qafaashay B/xaawo
Muxumed Maxamed Jaamac oo noqday askariga keliya ee laga qafaashay B/xaawo
Muxumed Maxamed Jaamac Aadan (Ina Magaale) oo ka tirsan Ciidamada Dowladda ee Degmada Beled Xaawo ku sugan ayaa noqday askariga keliya, ee ay qafaasheen Ciidamadii Jubbaland ee habeenkii Isniinta soo galeysay weeraray degmadaasi.
Muxumed Maxamed Jaamac oo 27 jir ah ayaa waxaa habeenkaasi gacanta ku dhigay Ciidamadii Jubbaland, ee uu horkacayay Korneyl Cabaas Ibraahim Gurey, ee ka soo tallaabay xuduudda Mandhera.
Sarkaal ka tirsan Saraakiisha Ciidamada Dowladda ee Degmada Beled Xaawo ayaa Dhacdo.com u xaqiijiyay maqnaanshaha askarigaasi iyo in lagu hayo Degmada Mandhera ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya.
“Muxumed Maxamed Jaamac waxaa gacanta ku dhigay maleeshiyadii uu watay Cabaas Ibraahim Gurey ee habeenkii soo galay magaalada. Habeenkaas heegan kuma uusan qornayn Muxumed, gurigiisa ayuu iska joogay ee xabadda markii ay bilaabatay ayuu gurigiisa ka soo baxay, isagoo markaasi ku sii jeeda xeradii uu ka tirsanaa ayay dhexda ka qabteen maleeshiyadii Cabaas Ibraahim, isla habeenkiiba waxay u gudbiyeen Mandhera.” Ayuu yiri Sarkaalkan oo codsaday inaanan magaciisa Warbaahinta loo adeegsan.
Waxa kaloo uu yiri “Markii uu dagaalku dhammaaday haddii lees tiro koobay, askarta intii dhimatay iyo intii dhaawaca ahayd mooyee waxaa la ogaaday inuu Muxumed maqan yahay, haddii baadigoob loo galayna waxaan ogaanay in lagu hayo Mandhera.”
Waxaa uu sheegay in Ciidamada Jubbaland ee uu horkacayo Wasiirka Amniga Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur (Janan), kuna sugan Mandhera ay isu qabteen in la dilo askarigaasi iyo inaanan la dilin.
“Xogta waxaan ku haynaa maleeshiyada Indho-korey ee joogta Mandhera inay dhexdooda isku qabteen, waan dileynaa iyo lama dili karo.” Ayuu yiri Sarkaalka ku sugan Beled Xaawo.
Sarkaalkan oo aan weydiinay in uu hadda noolyahay askarigaasi iyo kale ayaa ku jawaabay “Haa, wuu noolyahay, waxba kama haleysno, aan ka ahayn in xorriyaddii uu waayay.”
Xaaladda Degmada Beled Xaawo ayaa maalintii labaad degan, ka dib dagaalkii faraha looga gubtay, dadka badanina ku dhinteen ee Isniintii ka dhacay degmadaasi.
Dagaalkan ayaa noqonaya mid ka mida dagaaladii ugu qaraaraa ee ka dhaca degmadaasi, inta ay taariikhdu qoreyso.
Previous articleCiidan ku firxaday dagaalkii Beled Xaawo oo lagu celiyay Beled Xaawo
Next articleDowladda Somaliya oo Jabuuti ku eedeysay inay la safatay Kenya